News - အဘယ်ကြောင့်ဂဟေဆော်သောခြံစည်းရိုးကိုသုံးရမည်နည်း။
သင်တပ်ဆင်ထားသောခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားသည်သင်မျှော်လင့်နိုင်သောလုံခြုံရေးအရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ရိုးရိုးခြံစည်းရိုးကမလုံလောက်ဘူး။ ဂဟေဆော်သို့မဟုတ်ဂဟေကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသည်သင်လိုအပ်သောယုံကြည်မှုကိုပေးသောလိုင်းလုံခြုံရေး option ၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး welded ကဘာလဲ?
ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုးကွက်သည်မတူညီသောအသုံးချမှုများတွင်အသုံးပြုသောကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ဇယားကွက်သို့မဟုတ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်သတ္တုဝါယာကြိုးမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ချေးခြင်းအမျိုးအစားများကိုထပ်မံထည့်သွင်းခြင်း (ဥပမာ - ချေးခြင်း) ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်များကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိတိကျစွာအထိဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုးများဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။
ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုးသည်အထူးသဖြင့်အတားအဆီးတစ်ခုစီအားလမ်းဆုံတစ်ခုစီ၌အစက်အပြောက်ဖြင့်ဂဟေဆော်ထားသည့်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ခြံစည်းရိုးများတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုးကွက်များကိုသတ္တုတွင်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကာကွယ်မှုနှင့်ဥယျာဉ်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ဝါယာကြိုးကွက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး ဂဟေဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုးကိုသုံးပါ?
ဂဟေဆော်ကွက်ကွက်များ၏ဝါယာကြိုးများသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့်တာရှည်ခံသည့်အတားအဆီးတစ်ခု ဖန်တီး၍ အတူတကွတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုးသည်အလွယ်တကူကွေးခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်ခြင်းမရှိပါ ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုးသည်အသုံးချခြင်းအများစုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
post အချိန်: ဇန်နဝါရီ -13-2021